Dashain 2076(Dashain 2076) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
सुरेश न्यौपाने: जाडरक्सीबाट चारकोष टाढा, बाल्यपनको दशैं सबैभन्दा मज्जा
काठमाण्डौ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रवक्ता सुरेशकुमार न्यौपानेको जन्मथलो तनहुँ जिल्ला बन्दीपुर १ हो । हाल उनी काठमाण्डौ वनस्थलीमा बस्दै आएका छन् । दशैंमा पारिवारिक भेटघाट र स्कुले साथीहरुसँगको जमघट हुँदा बेग्लै रमाइलो माहौल सिर्जना हुने प्रवक्ता न्यौपाने बताउँछन् । सदाझैं यसपालि पनि दशैं मनाउन गाउँ गएका उनी घर जाने...
करोडौं सम्पत्ति गुमाएका सेयर लगानीकर्ता: कसको दशैं कस्तो ?
काठमाण्डौ । बजारका लगातारको गिरावटबाट प्रताडित सेयर लगानीकर्ताहरुले समेत यो पटकको दशैं हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन् । सेयर बजारको लगातारको गिरावटले सम्पत्ति घटेका पीरलाई पर सारेर उनीहरुले सदियौंदेखि चलिआएको परम्परालाई निरन्तरता दिंदै दशैं मनाए । हामीले यो क्रममा केही सीमित सेयर लगानीकर्ताको दशैं अनुभव बुझ्ने कोशिश गरेका छौ...
सेयर ब्रोकरको दशैं: कसको कस्तो ?
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । सेयर ब्रोकरहरुबिना सेयर बजारको परिकल्पना गर्न सकिन्न । लगानीकर्ताहरुको कारोबारमा भरपर्दा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नेपालका ५० ब्रोकर कम्पनीमध्ये प्रतिनिधिमूलक ढंगले हामीले केही ब्रोकर कम्पनीका प्रमुखहरुसँग उनीहरुको दशैं अनुभवको विषयमा कुराकानी गरेका छौ । कसको दशैं कस्तो भयो ? दशैंको...
सामाजिक सुरक्षाकोषका इडीको दशैं: नयाँ नोटसहित गाउँ जाँदाको नबिर्सने क्षण
काठमाण्डौ । तीस वर्षे बैंकिङ करिअर सम्हालिसकेका कपिलमणि ज्ञवाली अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत छन् । गुल्मी रुरु गाउँपालिका–२, ग्वादी घर भएका ज्ञवाली हाल कामपा–१६ वनस्थलीमा बस्छन् । दशैंलाई हिन्दूहरुको महान् चाड, आफन्त तथा इष्टमित्रसँग मनाइने पर्वका रुपमा लिने ज्ञवाली दशैंलाई सांस्कृतिक...
एडीबिएलका डेपुटी सीइओको दशैं: बुबाबिना खल्लो, गाउँका जेष्ठबाट टीका थाप्ने योजना
काठमाण्डौं । विगत लामो समयदेखि बैंकिङ करिअरमा रमाइरहेका प्रताप सुवेदी कृषि विकास बैंक(एडीबिएल)का डेपुटी सीइओ हुन् । पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका ११ सिल्मी घर भएका सुवेदी हाल कीर्तिपुरका बासिन्दा हुृन् । केटाकेटी छँदा दशैंका बेला मामाघर गएको र काकाहरुले पिङ हालेको, रंगीचंगी कपडामा सजिँदै मीठा परिकार बनाएर खाएको, खसी काटेको लगायतका...
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । बाल्यकालमा १०-१२ वर्षको उमेरमा गाउँघरमा रमाइलो गरी दसैँ मनाएको सम्झनाले प्रियराज रेग्मी रोमाञ्चक हुन्छन् । दसैँ अनुभव सुनाउँदा उनी बालापन झल्झल्ती सम्झिन्छन् । रेग्मी स्टक ब्रोकर नम्बर ५० क्रिस्टल कंचनजङ्घा सेक्युरिटिज प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । उनी स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन नेपालका पू...
नेप्से प्रमुखको दशैं सिंगापुरमा, किताब पढ्ने योजना
काठमाण्डौ । पच्चीस वर्ष इन्स्योरेन्स सेक्टरमा बिताइसकेका र हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदको पुख्र्यौली घर बैतडी जिल्लाको सिगास गाउँपालिका गैरा हो । हाल उनी काठमाण्डौ सरस्वतीनगरमा बसोबास गर्छन् । दशैंको आगमनलाई साउद धान भित्र्याउने, पिङ खेल्ने र टाढा–टाढाका मान्छेसँग जमघट हुने पर्वका...
सीआइटीका इडीको दशैं: मासुरक्सी छुँदैनन्, गाउँ गएर खेत घुम्छन्
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष जागिर खाएर निर्देशक पदबाट रिटायर्ड भई हाल नागरिक लागनीकोष(सीआइटी)का कार्यकारी निर्देशक(इडी) रहेका रमण नेपालको पुख्र्यौली घर मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर १ टंकीसिनवारी हो । हाल नेपाल काठमाण्डौ–१४ रविभवनमा बस्छन् । हिन्दूहरुको महान चाड दशैंलाई कार्यकारी निर्देशक नेपाल कृषि व्यवसायबाट...
सनराइज बैंकद्वारा टिकाको दिन निःशुल्क बस यात्राको व्यवस्था, कुन–कुन रुटमा चल्छ ?
काठमाण्डौ । सनराइज बैंकले आफ्नो १२ औं वार्षिकोत्सव अवसर र नेपालीहरुको महान चाँड दशैंलाई मध्यनजर गरी निःशुल्क बस यात्राको सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । दशैंको बेला काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायातको अभाव हुने र त्यस अभावलाई केही हदसम्म न्यूनिकरण गर्ने अभिप्रायले बैंकले निःशुल्क बस सेवा दशैंको टिकाको दिन अर्थात असोज २१ गते मंगलबार...
एनआइसी एशियाको दशैंमा ‘दक्षिणा प्लस’को स्किम, डिजिटल दक्षिणा दिए बैंकले बोनस थपिदिने
काठमाण्डौ । एनआइसी एशिया बैंकले दशैंलाई लक्षित गरेर ‘दक्षिणा प्लस’को योजना अघि सारेको छ । यो योजना अन्तर्गत दशैंमा टीका लगाएर यस बैंकको मोवाइल बैंकिङ प्रयोग गरी दक्षिणा रकम ट्रान्सफर गर्दा दक्षिणा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई बैंकको तर्फबाट थप रकम प्रदान गरिनेछ । ‘दक्षिणा प्लस’ नाम दिइएको यस योजना अन्तर्गत मोवाइल बैंकको...
ग्लोबल आईएमई, एनआईबीएल र सांग्रिला बैंकको ‘दसैँ काउन्टर’, कता–कता खुला रहने ? (सूचीसहित)
काठमाण्डौ । आफ्ना ग्राहकको सुविधाका लागि ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआईबीएल) र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले विभिन्न शाखाहरु दसैँमा पनि खुला राख्ने भएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड ग्लोबल आईएमईको उपत्यकाभित्रको कान्तिपथ शाखा असोज १८, १९ २०, २१ (टीकाको दिन) र २२ गते खुला राख्ने भएको छ । यो...
एनआइसी एशियाले दशैं विदाका दिन पनि सेवा दिने, कुन–कुन शाखा खुल्छन् ?
काठमाण्डौ । एनआइसी एशिया बैंकले ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी बडा दशैं २०७६ को सार्वजनिक बिदाका दिनहरुमा समेत बैंकका विभिन्न शाखाहरुमार्फत् सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ बडा दशैंको बिदाका दिनहरुमा समेत बैंकको देशभर रहेका विभिन्न शाखाहरु खुल्ला रहनेछन् । जस अनुसार २०७६÷६÷१८ गते फूलपातीको दिन काठमाडौं उपत्यकाभित्र...
दशैंमा ठगिँदै यात्रु : टिकटमा तोकिएको मूल्य, मौखिकरुपमा बढी रकम
- नारायण ढुंगाना काठमाण्डौ । दशैँ मनाउन काठमाडौँबाट विभिन्न जिल्लामा जाने यात्रु ठगीमा परेको पाइएको छ । उनीहरु चर्को भाडा तिरेर घर जान बाध्य भएका छन् । कतिपय सवारीका चालकले सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर भाडा उठाएर यात्रु ओसारपसार गरेका र कतिपय टिकट काउन्टरबाटै पनि बढी भाडा असुलिएको पाइएको छ । काठमाडौँबाट हेटौँडा जान लागेका एक यात्रुले ४५०...
एनआइसी एशियाले बनायो भाटभटेनीको ‘दशैं माहौल’, १५% सम्म छुट पाउन ग्राहकको तँछाडमछाड
काठमाण्डौ । दशैंसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्छ । विभिन्न कम्पनी, व्यवसायहरु आफ्ना ग्राहकहरुका लागि विभिन्न छुट तथा अफरका योजना ल्याएका छन् । केही वर्षयता बैंकिङ्ग क्षेत्रले पनि आफ्ना ग्राहकहरुका लागि चाडपर्वलक्षित छुटका योजना ल्याउने क्रम बढेको छ । यही क्रममा एनआइसी एशिया बैंकले यस वर्षको दशैंमा आफ्ना ग्राहकहरुका लागि ‘दशैं...
दशैंमा ‘घोर्ले खसी’ भित्र्याउन भ्याइँनभ्याइँ (फोटो फिचर)
- धर्म मलासी काठमाण्डौ । दसैँको आगमनसँगै उपत्यकामा खसी, बोका र च्यांग्रा किन्नेको घुइँचो बढ्न थालेको छ । विशेषगरी दसैँको अष्टमीका दिन बोका बलि दिने प्रचलन छ । त्यस्तै दसैँमा मासुका लागि खसी र च्यांग्रा किन्ने गरिन्छ । दसैँको तृतीयका दिन नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको थापाथलीस्थित अञ्चल कार्यालयमा पुग्दा खसी, बोक...